बि’रयानी मन पर्छ ? यसरी स’जिलैसंग घरमै बनाउन सकिन्छ चि’केन बि’रयानी - HPsanchar.com
स्वादिलो बि’रयानी खानका लागि रे’ष्टुरेन्ट धाउनै पर्छ भन्ने छैन । यसलाई सजिलै घरमा पनि बनाउन सकिन्छ । यहाँ चि’केन बि’रयानी बनाउने विधी दिइएको छ । यसका लागि बो’नलेस चि’केन चाहिन्छ । आवश्यक सा’मग्री फ्रा’इड चि’केनका लागि चिकेन- आधा केजी अ’दुवा र लसुनको पे’स्ट- एक चम्चा रातो खु’र्सानी पाउडर- आधा चम्चाबेसार- आधा चम्चा गरम मसला- आधा चम्चा नुन- स्वाद अनुसार चामलका लागि बासमती चामल- दुई कप ल्वाङ, सुकुमेल र मरिचको धु’लो रा’तो खु’र्सानीको धुलो- एक चम्चा बेसार एक चौथाई चम्चा अदुवा र लसुन पेस्ट- एक चम्चा प्याज- चार वटा, स-सना टु’क्रामा काटिएको गो’लभेडा- चार वटा, टु’क्रा पारेको कागतिको रस एक चम्चा पुदिना धनिया- केसर- थोरै दु’धमा भि’जाउने दही नुन- स्वाद अनुसार तेल- दुई ठूलो चम्चा
कसरी बनाउने ? सबैभन्दा पहिला बासमती चामललाई आधा घण्टा पानीमा भिजाउने । एउटा भाँडामा चिकेन, अदुवा लसुनको पेस्ट, रातो खुर्सानी, बेसार, गरम मसला र नुन मिसाएर तीस मिनेट राख्ने । त्यसपछि चिकेनलाई डिप फ्राइ गरेर राख्ने । अब फ्राइ प्यानमा तेल तताएर आधा प्याज हालेर फ्राइ गर्ने र निकाल्ने । त्यस तेलमा बाँकी रहेको प्याज, गरम मसला हालेर केहि मिनटे भुट्ने । फेरी त्यसमा काटेको गोलभेडा, बेसार हालेर पकाउने । त्यसमाथि रा’तो खु’र्सानी पाउडर, धनिया पा’उडर हरियो खु’र्सानी, दही, पुदिना र हरियो धनिया हालेर ६ मिनेट जति पकाउने । अब पानी हाल्नुपर्छ । पानी उम्लन थालेपछि बासमती चामल हालेर फ्रा’इ गर्नुपर्छ । त्यससँगै चि’कने पनि हाल्ने । कागतिको रस हाल्ने र आगो धिमा बनाउने । चामल उम्लन थालेपछि त्यसमाथि फ्राइ गरेको प्याज र केसर घो’लेको दु’ध हाल्नुपर्छ । अब ढक्कनले छोप्नुपर्छ । पाँच मिनेटको लागि आँ’गो तेज बनाउने । यसपछि फ्रा’इ चि’केन बिरयानी तयार हुन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् सन्तुलित आ’हार फि’ट रहनको लागि हामीले सबैभन्दा पहिले आफ्नो आ’हारमा ध्यान दिनुपर्छ । दै’निक जतिसक्यो ता’जा फल, सा’गपात एवं सन्तु’लित डा’इट भएको खाना खानुपर्छ । एक स्व’स्थ सन्तु’लित आहारले हामीलाई फि’ट राख्नको लागि मद्दत गर्दछ । आफ्नो डा’इटमा प्रो’टिनलाई समेत सामेल गर्नुपर्छ । प्रो’टिन शा’काहारी र मां’साहारी दुवै खानामा पनि पाइन्छ । जसको लागि मां’साहारीहरुले कु’खुरा, मा’छा आदि खान सक्छन् भने शा’काहारीहरुले दू’ध, के’रा खान सक्छन् । यसका अला’वा दैनिक गतिवि’धिहरुलाई पूरा गर्नको लागि पनि हाम्रो श’रीरलाई सही मात्रामा ऊ’र्जाको जरुरत पर्दछ । शरी’रलाई ऊ’र्जा दिनका लागि कार्बो’हाइड्रे’डयुक्त आ’हार खानुपर्छ । शरी’रमा कार्बोहा’इड्रेडको क’मीबाट श’रीर सु’स्त हुन पुग्छ भने यसले क’मजोरी पनि म’हसुस हुन थाल्छ । त्यसैले आफ्नो डा’इटमा कार्बो’हाइड्रेड पनि सामेल गराउनुपर्छ । फि’ट रहनको लागि बो’सोयुक्त आहार खानु हुँदैन । स’न्तुलित खाना खाने र व्या’याम गर्नाले हाम्रो श’रीर सन्तु’लित हुने गर्दछ । जसबाट हामीमा आत्मविश्वास बढाउने काममा पनि मद्दत मिल्छ । व्या’याम अनिवार्य फि’ट रहनको लागि स’न्तुलित आ’हार मात्रै होइन । व्या’याम पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।
सन्तु’लित आ’हारपछि दैनिक व्या’याम, जस्तै- दौ’डने वा अन्य किसिमका शा’रीरिक कसर’तले हाम्रो श’रीरमा ऊ’र्जा प्राप्त हुन्छ । ह’प्तामा केही दिनमात्रै यस्ता व्या’याम गर्दा पनि धेरै फाइदा हुन्छ । का’र्डियो ए’क्सरसाइजले मु’टुलाई मजबुत बनाउन मद्दत गर्दछ । स्ट्रे’न्थ ट्रेनिङले मां’सपेशीहरुलाई मज’बुत बनाउने गर्दछ र स्ट्रे’चिङ एक्सर’साइजले श’रीरको लचि’लोपनामा सुधार गर्न मद्दत गर्दछ । र’क्त परिसञ्चरणको लागि पनि नियमित व्या’याम आवश्यक हुन्छ । यसले त’नाव कम गर्न पनि मद्दत गर्दछ । पर्याप्त नि’द्रा फि’ट रहनको लागि सन्तु’लित आ’हार र पर्याप्त व्या’यामका साथसाथै पर्याप्त नि’द्रा पनि आवश्यक हुन्छ । यदि नि’द्रा पुगेन भने मेटा’बोलिज्म, मूड, एका’ग्रता, याद’दाश्त, स्ट्रेस, हा’र्मोन, रो’ग प्रति’रोधक क्ष’मता र हृ’दयमा अ’सर पर्दछ । पर्याप्त नि’द्राले नै हाम्रो म’स्तिस्कलाई आ’राम दिन्छ र शरीरलाई पनि फिट राख्न मद्दत गर्दछ । त्यसैले दैनिक ७-८ घ’ण्टा अनिवार्य निद्रा पूरा गर्ने गर्नुपर्छ । अरु के-के गर्ने ? फि’ट रहनको लागि माथिका तीन कुराहरु महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसका अलावा निम्न कार्यहरुले पनि हाम्रो श’रीरलाई तन्दुरुस्त र स’न्तुलित बनाइराख्न मद्दत गर्दछ । हरेक दिन बिहान खाजाको रुपमा अनिवार्य पौ’ष्टिक आहार सामेल गर्ने। दिनभरीमा जतिसकिन्छ धेरै पानी पिउने । शरी’र फिट राख्नको लागि त’नावलाई ह’टाउने। आफूले नियमित खाने खानामा शुद्ध ते’ल प्रयोग गर्ने । नियमित रुपमा खेलकूदमा सहभागी हुने । दैनिक दूध पिउने । दैनिक बिहान हिँड्ने वा दौडने बानीको विकास गर्ने ।
ता’कत बढाउने सबैभन्दा स’स्तो उपा’य, यसरी गर्नुहोस् आफ्नै घ’रमा तया’र